Oh.. My Blog!: November 2007
Open Letter & Open Myself
အချစ်ဆုံးသို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ တဲ့ ကိုဝေနဲ့ မလေးမ ရေးခိုင်ထားတာ ကြာလှပေါ့ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ရှောင်နေတာ.။ ဘာရေးရမှန်းမသိလို့ပါကွယ် ခွင့်လွတ်တော့။ ကဲ အခုတော့ ရေးလိုက်ပါပြီ အံ့သြောစရာကောင်းတာက အဲ့ဒီ စကားလုံး တွေဟာ စာအိပ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ စာအိပ်ထဲက သီချင်းတပုဒ် အဖြစ် ထွက်ကျလာခဲ့ကြသတဲ့။ အလဲ့..။ ဒွေး နဲ့ ထွန်းအိဒ္ဒြာဗို ရဲ့ ဆုံမှတ်ဟာအနန္တမှာ ဆိုတဲ့သီချင်းပါတဲ့ကွယ်..။ (ဟဲ. ဟဲ. ပိုင်တယ်နော် ရေးစရာမလိုတော့ဘူး :P)
လိုက်ခဲ့ချင်ပေမဲ့ ဘယ်လိုဖွင့်ပြောရဦးမလည်း မိန်းကလေးရဲ့ဘ၀ကို စာနာကြည့်မှပေါ့..
နုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် နေခဲ့လိုက်ပါ ကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့ လမ်းတွေထဲ ကိုယ်မခေါ်ရက်ခဲ့ ဘူး..
ရွှေအိမ်စံ နန်းထက်ထားလည်း ကိုယ်မင်းမရှိမှတော့ မပျော်နိုင် ပါ ဘူး..
မိုးမြင့်ထက်က ကြယ်စင်ခစား မော့ကြည့်ရသူ လမင်းလေး ရေ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀က ခရောင်းတော လိုပဲ မလာချင်ပါနဲ့လေ။
တို့ရဲ့အဖြစ်က ရင်နာယုံနဲ့ လမ်းခွဲပြီးဆုံး နေပြီပဲလေ. ပေါင်းစပ်ခွင့်တွေ မရှိတဲ့နောက် ဒီလိုနဲ့ပဲ ဝေးကြမှာလား
လုပ်ရက်တယ်လို့လည်း ကိုယ်ဘယ်လိုများ ပြောမလည်း ကိုယ်စီဒါဏ်ရာတွေနဲ့မို့ မပြောရက်ခဲ့ဘူး… ရေး.
ရင်မှာမီးတောက်များနဲ့ ဟန်လုပ်လို့ ထားလည်း နာ ကျင် နေ
အို.. တို့နှစ်ယောက် ဘ၀က ပြိုင်နေတဲ့ မျဉ်းလား..
အလှမ်းဝေးလွန်းလှတယ် မြေပြင်ကိုယ်ဆို မင်းကမိုး..
ပေါင်းစပ်ခွင့်တွေ မရှိတဲ့နောက် ဒီလိုနဲ့ပဲ တို့ ဝေး သွား...
ရုပ်အဆင်းကတော့ ကိုလွင်မိုးပေါ့.. (ဘယ်သူလည်းကွ ချောင်းအတုဆိုးပြီး သီးသွားတာ)
နဖူးက နောက်ဆယ်နှစ်လောက်ဆို သေချာပေါက် ပညာရှိနဖူး ဖြစ်မဲ့လက္ခဏာရှိတယ်.. (အဟမ်း အဟမ်း.)
မျက်ခုံးက ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း.. (ဆိုင်မှာပြင်ထားတာလားဟင် လို့တောင် မေးတဲ့လူရှိတယ်.. တကယ်.. )
မျက်လုံးက တော့ ညာမပြောဘူး သေချာကြည့်ရင် အမိုက်ဆုံးပဲ.. (စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ရင် တော်ယုံကောင်မလေးတွေ ရင်ဆိုင်ပြန်မကြည့်ရဲဘူး.. ဟင်း ဟင်း ဟင်း ဟင်း)
နှခေါင်းက စလိုးဒေါင်း တပ်ထားတယ်.. (တချို့ကပြောတယ် လှပစွာ ကိုင်းညွှတ်နေသတဲ့ ခွီ)
အရပ်က သပ်သပ်ရပ်ရပ် ရှိယုံ မမြင့် မနိမ့် (အဲ.. နည်းနည်းတော့နိမ့် ဟဲ)
အသားအရေကတော့ ချောမွေ့လှပ စိမ်းစိမ်းစိုစို အို.. ရွှေမှုန်တွေစား မွေးထားသလားထင်ရတယ် (အဟတ် အမှန်တိုင်းပြောရတာ ရှက်လိုက်တာ)
ဘော်ဒီကတော့ အမေမွှေးကတည်း က ပိန်ပိန်ပါးပါး လှပြီးသား (ကဲကဲ ဟုတ်ပါတယ် ၀ါးခြမ်းပြားပါ တကထဲ သူများလှတာ မနာလိုတဲ့သူတွေက ရှိသေးတယ်)
စိတ်ဓါတ်လား အင်း.. ကြွပ်ကြွပ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ ပျော့ညံ့တယ်.. (အမ် ဘယ်လိုကြီးတုန်း)..
ဟဲဟဲ အပေါ်က ပုံပန်းသဏ္ဍာန် အကြောင်းရေးထားတာ ဖတ်ရင် သိသာပါတယ်..
ကပျက်ကရှော်. ဗရုတ်သုတ်ခ. နောက်တီးနောက်တောက်. စတဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ရှိသော်လည်း…
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကရော အခုရော ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလွန်တရာ မက အလွန်တထောင် တော်တဲ့သူရှိသတဲ့.. အဲ့ဒါ ငါပဲ လို့ ပြောမဲ့ကောင်မျိုး (ဟယ် အရှက်နည်းတာတော်)..
စကားများများ မပြောဘူး လုံးဝနီးပါးမပြောတာ သိတယ်မလား အဲ့ဒါ ပညာရှိတွေရဲ့ ကြင်အင် လက္ခဏာပေါ့ (မူးမှပြောတာ :P)
ဟိုဦးကပ်စီး ဒေါင်းကြီးတို့နဲ့ နည်းနည်းမှ မတူတာက မမြဲခြင်းတရားကို အမြဲဆင်ခြင်နေတဲ့လူဆိုတော့ မနက်ဖြန် ငါသေရင်သေမှာ ဆိုပြီး ဒီနေ့ရှိတဲ့ပိုက်ဆံကို မကုန်ကုန်အောင်သုံးတယ်.. အကြွေးသာရမယ် ဆိုလို့ကတော့ ဘာမှအသုံးမလိုတဲ့ ဆင်ကိုတောင် ၀ယ်ပြီး အိမ်အောက်မှာ ကြိုးချည်ထားလိုက်ဦးမယ်. (ဟို ဆင်ဂါဘူ ဘဏ် တတိထား ဘူးထွား ဟား ဟား :P)
ဟဲ ဟဲ စတာပါဗျာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ ထားခဲ့ချင်လို့ပါ အမှန်တော့ အဲ့ဒီအရေချင်းတွေ အားလုံးဟာ ရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ ပြောခဲ့မိတယ် ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ် ( ငှဲလျောင်း ငှဲလျောင်း… )
ဟုတ်ကဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပြီးတော့ အခုလို ကျနော့်အကြောင်း အမှန်တိုင်း သိသွားအောင် ပြောဆိုခွင့် ရဘို့ အခွင့်ရေး ဖန်တီးပေးတဲ့ ဒေါင်းကြီးကိုလည်း ကျေးဇုးနည်းနည်းပို တင်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်.။ (ခေါင်းလေးငုံ့၍ စင်ပေါ်မှ ဆရာကြီး ပုံစံနှင့်ပြောကာ နုတ်ဆက် နောက် ငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက်နှင့် ဆင်းသွား)
ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ရွှီ…. (ပရိတ်သတ်များ၏ လက်ခုပ်သံများ)
Posted by Tesla at 1:38 PM | Links to this post
သိမ်းငှက်တကောင် ကဲ့သို့ အမြင့်ဆုံး နေရာ အထိ ထိုးတက် သွားကာ အောက်ပြန် ငုံ့ကြည့်လိုက် မည်ဆိုပါက အစိမ်းရောင်ဝတ် မင်းသမီး တပါးအား ငြိမ်သက် သိမ်မွေ့စွာ လဲလျောင်းလျက် ရှိနေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ အချိုးကျစွာ ရှိုက်ဖိုနေသော ခန္ဓာကိုယ်တခုဖြင့် လှပ လျက်ရှိနေသည်မှာ တချိန်ကတော့ ခန့်ခန့်ထည်ထည် ဖြင့် မဟာဆန် ခဲ့ဘူးသည်။ ကပ်လျက်ရှိသော အရှေ့ဘက် နှင့် အနောက်ဘက်မှ စီးဝင်လာမှုများကြောင့် သူမအား နို့နှင့်ပျားရေတို့ စီးဆင်းရာ ကုန်းမြေ တခုအဖြစ်ပင် ခေါ်ကြသည်။ သို့သော် သူမ၏ ဦးခေါင်း အပေါ်တည့်တည့်တွင် ပါးစပ်ဟလျက် ချောင်းမြောင်း နေသော နဂါးတကောင်ကိုမူ မြိုပြစ်လိုက်ရန် အသင့် အနေအထား နှင့်လည်း တွေ့နိုင်ပါသေးသည်။
တဖြည်းဖြည်း နိမ့်ဆင်းကာ ပျံဝဲလျက် ကြည့်မည် ဆိုပါက သူမသည် သာယာလှပသော တောတောင် ရေမြေ စိမ့်စမ်းများ မျက်စိတဆုံး မြင်နိုင်သော စပါးကွင်းပြင်ကျယ် များကို ကြွယ်ဝစွာ ပိုင်ဆိုင်ထား ပြန်သည်။ မိုးရာသီဆိုလျှင် အစိမ်းရောင်ထနေသော လယ်ကွင်း ပြင်ကြီးများကို ၀တ်ဆင်ကာလှပနေပြီး ဆောင်းဦးပေါက်ချိန်တွင် မှဲ့ဝင်းနေသော စပါးနှံများဖြင့် ရွှေညိုရောင် လက်နေသော ၀တ်ရုံတစ်ခုကို ပြောင်းလဲ ခြုံလွှမ်းလိုက်သည်။
ယဉ်ကျေးလာစေရန်၎င်း သံသရာမှ လွတ်မြောက်စေရန် ရည်သန်၍၎င်း တည်ထားကြသော စေတီပုထိုးများကို အစက်အပြောက်များ များစွာ ချထားသည့် အလား သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ် အနံ့ တွင် တွေ့နိုင်သည်။ ကဗျာဆရာ တယောက်၏ မျက်လုံးမျိုး သက်သက် ဆိုပါက နေရောင်အောက်မှ ကြီးကျယ်လှပသော မီးတောက် ပိရမစ်ကြီးများ အဖြစ် ခမ်းခမ်းနားနား ထိုးထွက်လျက်။
သူမကိုယ်တိုင် မွေးထုတ်ပေးခဲ့သော ရာဇ၀င်များ စီးဆင်းရာ မြစ်ဧရာ ကိုလည်း သူမ၏ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်အသား တခုအဖြစ် တွေ့နိုင်ပါသည်။ မြစ်ဧရာထဲတွင် သမိုင်းတွင်ကျန်ခဲ့မည့် ၀ိဥာဉ်များ ရဲဝံ့သောသွေးများ အေးမြသော ရေကြည်များသည် တခါတရံ ကမ်းပါးယံကို ဒေါသတကြီး ရိုက်ခတ်လျက် တခါတရံ ကဆုန်ဆိုင်း တိုးဝင်သော စစ်သူရဲကောင်း၏ မြင်းတကောင်ကဲ့သို့ အားမာန်ပြင်းလျက် တခါတရံ ကမ်းစပ်မှ လေယူရာတိမ်း ယိမ်းနွဲ့သော ၀ါးရွက်တို့၏ အသံအတိုင်း စီးချက်ကျ ကခုန်နှုးညံ့လျက် စီးဆင်းခဲ့ကြသည်။ စီးဆင်းလျက် ရှိနေသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ စီးမြဲအတိုင်းပဲ ဆက်လက် စီးလျက် ရှိနေပါလိမ့်မည်။
သူမသည် အပေါ်ယံ သက်သက်သာ လှပသူမဟုတ်ပါ။ သူမ၏ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းတွင်လည်း ကုန်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိဟု ထင်ရလောက်အောင် ရေနံများ ခဲမဖြူ အဖြိုက်နက် ရွှေ ငွေ ကြေးနီ ပတ္တမြား ကျောက်စိမ်း နီလာ စသည့် သယံဇာတ များစွာကို သူမ၏ ရင်သွေးများ အတွက် ပြည့်စုံလုံလောက်စွာ သိုဝှက် ပေးထားသူဖြစ်သည်။
ယခုတွင်မူကား သားဆိုးသားမိုက်များ မလိမ္မာသော ရင်သွေးများ ကိုယ့်အကျိုး သာသိသော သူများ အကျိုးယုတ်နေမှန်း သိပါလျက် ပေကတ် ရပ်နေသူများ သူမရင်ဝကို မသိမသာ ခြေစုံကန်နေကြသူများ ကြောင့် သူမသည် ဘ၀ပျက်မတတ် ခါးသီးစွာ ခံစားနေခဲ့ရသည်။ သူမ၏ အမည်ကိုတွေ့လျှင် အသုံးမကျခြင်း ခေါင်းငုံ့ အောက်ကြို့ရခြင်း ရာဇ၀တ်မှုဟုတ်သည် မဟုတ်သည်ဟု မခွဲခြားနိုင်ခြင်း ယဉ်ကျေးမှုနိမ့်ပါးခြင်း သွေးစွန်းနေခြင်း စသည်တို့နှင့်ပင် တွဲမြင်လျက် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အခုတော့ သူမသည်လည်း အရိုင်းအစိုင်း နီးပါး ဖြစ်လာလျက်ရှိပြီ။
သူမအား လိမ္မာတိုးတက်လာစေရန်မူ သူမမွေးထုတ်ပေးခဲ့သော ရင်သွေးများ အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိသည်။ သူမကို အဓိကထိမ်းသိမ်းရန် တာဝန်ယူထားသော သူများအတွက်မူကား တာဝန် အရှိဆုံးဖြစ်သည်။ တဦးနှင့်တဦး လက်ညိုးထိုး ကာ ငြင်းခုန် လွဲချနေကြသော လူအများကြား အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ကြ၍ သွေးစွန်းပေလျက်ရှိသော ခန္ဓာကိုယ်တခုနှင့် သူမသည် စိတ်ပျက်အားလျော့စွာ ခက်ထန်နေပြီ။ သူမအောက်တဲ့တဲ့တွင်ရှိသော ပင်လယ်ထဲသို့ ထိုးဆင်းသွားရန်ပင် ဟန်ပြင်နေပြီ။
သို့သော် မိခင်တယောက်အဖြစ် အားကိုးနေကြရသော သူ့ရင်သွေးများအတွက် သူမသည် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ တိုးတက်လာစေရန် ပြုပြင်ပေးမည့် နတ်သမီး တပါးပါးအား ရိုင်းစိုင်း ကြမ်းတမ်းစွာ စောင့်မျှော်လျက် ရှိနေရှာပါသည်။
Posted by Tesla at 1:37 PM | Links to this post
Oh .. Wonderful day for you..
You reached this day
Your 13 & Half years day light
13 & Half years nights.
You already passed these days with many successes
May be faced with many failures.
Anyway, you have duties, tasks to be continues
To pass difficult paths...
To surf the seas…
To climbamountain .. and.....
To shoot the stars…
Yeap.. you have 74% left to finish your life.. Go Ahead…
Posted by Tesla at 9:56 PM | Links to this post
”လုံးဝမနားပဲ ခုန်ပေးနေခဲ့ရတာ မောနေပြီနော်“
တလိမ့်ခေါက်ကွေး တက်လာရသဖြင့် အတက်ယာဉ်ကို ဦးစားပေးရန်
တနေ့တခါ သနားကြင်နာတတ်သူဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရေရွတ်ပါ
ကြေညာပါ ထင်ပါ ပွားများပါ
ထို့နောက် ရေနစ်သူကို ၀ါးကူ၍ထိုးပြစ်လိုက်ပါ..။
အနုပညာသည် ဘာအတွက် ဘယ်သူ့အတွက် ဘာဖြစ်ဘို့အတွက်တဲ့.
ငါ့အတွက်မူက ငါဖန်တီးသော ငါ့အနုပညာသည်
ထို့ကြောင့် အယုတ်ညံ့ဆုံး အနုပညာအား ငါပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုသာ သတ်မှတ်ကြပါလေ..။
တုန့်ကန်ရုံးထွက်နိုင်မှု စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးသော စာရင်းများထဲတွင် မမြင်ရသောလေ ပါသည်။
ထို့အတူ လေကဲ့သို့ မမြင်ရ လေထက်ပင်သိပ်သည်းဆ ပိုများသော
ဖိနှိပ်ခံစိတ်များ၏ ရုံးထွက်ခြင်မှုသည်ကား ဆိုဖွယ်ရာမရှိ..။
သို့သော် လှုံလှူံခြုံခြုံရှိရန်တော့ လိုအပ်သည်။
မေ့လျော့ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော ယစ်မူးစေတတ်သော နိဗ္ဗာန်၏ဖီလာဖြစ်သော
ထို. ဘီယာသည် အရက်မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြရန်
ဟား ဟား ဟား ဂုဏ်ဆိုတာ ငွေကိုခေါ်တယ် တဲ့.။
အဲ့ဆိုင်းပုဒ်တွေက အခန်းအ၀မှာထားပြီး လူတိုင်း(လူတိုင်း) ဖတ်ပြီးမှသာ
၀င်လာရန်ဆိုရင် ဂွကျတယ်လို့ မထင်ဘူးလား။
သိပ်ပြီး အကျိုးအမြတ်ဆန်တယ်လို့ မထင်ဘူးလား။
မမြဲခြင်းတရားအား ပါးစပ်နားတွင်ထား၍ မြဲခြင်းတရားကို
လက်ထဲတွင် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဆုပ်ကိုင်ကြသောအခါ.
ငါ့နဖူးမှာ ဘုရားသခင်လို့ ကပ်ထားမှာပေါ့ ကဲ.. ရှိခိုးကြပေတော့
တွေ့လား အဲ့ဒါ မိုက်ရိုင်းတယ်မလား..။
အဆင်မပြေတာတွေ များနေတော့လည်း စိတ်လေတယ်
သူကများ စိတ်ညစ်တယ် ရှိရသေးတယ်။
ဘာကြောင့် စာမရေးတာကြာနေရတာလည်း ဆိုတော့ အပေါ်က အပိုင်းအစ များကြောင့်လည်းပါသည်။ တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ.. စိတ်က စည်းလွတ်ဘောင်လွတ် ဖြစ်နေလေ၏။ အဲ့လိုစိတ်တွေထဲက ရုံးမထွက်နိုင်ပဲ ပိတ်လှောင်နေတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြင်ကတ်လာသည်။ သောက်သုံးမကျဘူး ဆိုပြီးမြင်လာသည်။ ဒါပေမဲ့ တနေ့တနေ့ သူတို့ကိုပဲ မြိုမြိုထားရသည်။ အခုတော့ သွားချင်ရာ သွားတော့ကွာ ဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်ပြီး ဘေးမဲ့ ပေးလိုက်သောအခါ ၀ရုန်းသုန်းခါး ပြေးထွက်သွားကြသည်။ ထိုစိတ်များ ကောင်းရာသုဂတိမလားကြပါစေနှင့်။ စာဖတ်သူထံသို့ မတော်တဆ လာရောက်ခိုလှုံခွင့်တောင်းလျှင်လည်း လုံးဝ လက်မခံပါနှင့်။ သို့သော် မွေးမြူတတ်လျှင်တော့မူ မဆိုး ရှာပါဘူးလေ..။ လူတွေချဉ်သော လူပေါင်းမဆန့်သော ထို စိတ်မိုက်များအား ပြစ်လိုက်ပြီ မကောင်းသူထိပ် ကောင်းသူထိပ်ပဲ.. ကဲ.... အခုမှ နေသာထိုင်သာရှိသွားတော့တယ်.. တကယ်.. :D
Posted by Tesla at 4:10 PM | Links to this post